Nka | Nhicha Franchises | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»Franchise Techclean
Teknụzụ bidoro ịzụ ahịa na 1983 wee bụrụ nke Ndị isi ndị isi UK na sistemụ ọcha. Enwere ike ịnwe Techclean ngwa ngwa dịka aha nke ụlọ yana uru dị ka ụgwọ ọrụ arụmọrụ dị ala nke na-atụgharị ya na oke dị elu ma na-adigide. Ihicha ebe a na-edebe data, ebe a na-arụ ọrụ na ihe ndị dị ka chọrọ ọkachamara na ọkachamara na anyị, anyị na-enye ụzọ dị iche iche nke usoro nhichacha nke ndị ahịa dị iche iche si FTSE 100 si gọọmentị gaa azụmaahịa mpaghara, ọrụ ebere, ụlọ akwụkwọ na ọbụna ụlọ ọrụ ọgwụ, n'etiti ndị ọzọ. Anyị na-ehichasị ebe ọrụ, laptọọpụ, ndị na-ebi akwụkwọ, igwe foto, igwe fax, nyocha, telefon, EPOS, igwe na-agwakọta, igwe ndọrọ ego na ọtụtụ sistem. Techclean bụkwa onye ndu ahịa n’ịcha nhicha kọmputa, Rolọ data & icationlọ Nkwukọrịta, yana ụzọ nwara ọfụma maka nhicha ọpụrụiche a dị. Anyị na-achọ mgbe niile iwebata ngwaọrụ ọhụrụ na ịchọpụta ụzọ nnata ego na azụmahịa azụmaahịa gara aga ma ọ bụrụ na otu ihe dị ọhụrụ bụ ntinye ma ọ bụ emehie ọrụ nye ndị ahịa. Ngwaahịa anyị abụghị carcinogenic (nke sitere na usoro ebumpụta ụwa) wee kpochapụ 99.999% nke ahụhụ ikuku niile.
Nnukwu ego ndị ọzọ a na-enweta
Na mgbakwunye, anyị ga-enye ụlọ ọrụ nzuzo aha ụlọ ọrụ maka ndị ukwu na ndị nta ka ọrụ ọzọ. Teknụzụ na-agba mbọ ịbụ ahịa ahịa ahịa sitere na narị afọ nke na-enye ndụmọdụ na ụzọ dị mma maka ndị ahịa anyị wee mara na ha bụ ikike na ngalaba a yana usoro nhicha ọcha na usoro dị iche iche site na iji ngwaahịa ndị pụrụ iche Teknụzụ. Teknụzụ na-enye otu n'ime ohere dị mma aha franchise dị ugbu a.Watch Video
Teknụzụ bụ ọrụ ntụgharị ahịa zuru oke na ọnụ ahịa ntinye nke £ 19,500 + VAT. Anyị na-enye ngwugwu azụmahịa zuru oke nke gụnyere, mana ọnweghị oke:
Ọzụzụ - ma na isi Office na ndị nwere franchisees dị adị.
Comprehensive Marketing Launch Mmemme.
Nnukwu mbido mbido na akụrụngwa.
Usoro ahia ndi ozo zuru ezu na ahia ahia.
Njikwa ego nchịkwa ego.
Nkwado na-aga n'ihu site n'aka otu ndị isi ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị afọ 70 ahụmịhe na ịsụgharị ihe.
Usoro teknụzụ na akwụkwọ ahịa.
Efu Arụ Ọrụ Dị ala
Teknụzụ bụ azụmaahịa enwere ike ịnwe ụlọ n'ụlọ ngwa ngwa wee si otú a wepụ uru ego ụlọ ịgbazite na ọnụego ya. Offọdụ n'ime franchise anyị ọ bụla nwere amasị nke ha Teknụzụ nkeji. Ihe ọ bụla ị họọrọ ị ga-achọ 'ohere ụlọ ọrụ' gị, obere mpaghara maka ịchekwa ngwaahịa na akụrụngwa, PC ga-ahazi nchịkwa azụmahịa gị na ala azụmahịa gị.
Ohere Ndị Pụrụ Iche Na-enweta
Techclean na-ama ụma azụmaahịa dị ala - enweghị mgbazinye, enweghị ọnụego na ndị ọrụ akwụ ụgwọ dịka mgbe ejiri were ha n'ọrụ. Franchisees na-akọ akụkọ dị nha nke 60%. N'ịgbakwunye ngwaahịa ọhụrụ, a na-ekepụta ụzọ mmiri ọhụrụ na -emepụta na ahịa na-abawanye elu, a na-atụnye ụtụ ahịa ga-akwụsi ike. Anyị na-achọ ndị bụ:
Ezigbo ndị na-ekwurịta okwu ma nwee ọ buildingụ na gị na ndị ahịa na-enwe mmekọrịta.
Cipdọ Aka na Nhazi Haziri
Jikerero itinye ihe siri ike iji wuo ahia.
Ike ma nwee ike iso usoro azụmahịa.
Dị ka o kwesịrị, ịkwesịrị inwe ikike maka ịre ahịa na ịre ahịa, nwee obi ụtọ ijikwa otu ma nwee ụkpụrụ omume dị elu. Teknụzụ dika ọdịnala si di, ọ n’ere ndi ndi ahia ahia ezigbo oru. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ka onye franchisee na-eje ozi na ngalaba gọọmentị otu ụbọchị, na-aga ụlọ akwụkwọ na-esote ya ma hichaa ọnụ ụlọ data na ụlọ ọrụ FTSE100 na atọ. Yabụ, ịkwesịrị ị nwee ike iwelata ọrụ dị iche iche, ịhazi, hazie ma na-ebute ọrụ ụzọ ma nwee ahụ iru ala iji zụ ahịa ndị ahịa buru ibu. Ahịa maka Teknụzụ ọrụ buru ibu. O sara mbara nke ndị ahịa buru ibu. Onu ogugu nke uzo enwetara na-akpali akpali. Will ga-esonye n’inwe ahia nke nwere ezigbo ihe ịga nke ọma n’agụ ahịa, ogologo ahịa n’ọma ahịa na oke ndọghachi azụ ga-esonye, ​​ị ga-esonye n’otu na-anya isi akụkọ ya, na usoro azụmahịa ya na nke kachasị mkpa na aha ya maka ịkwado franchisees n’oge niile. aka ahia ha.